OnePlus 3T Review - News Fitsipika
Ny OnePlus 3T finday avo lenta no tena tsara. Ny mety sy ny farany dia hatrany any amin'ny tsara indrindra, ny vy nanaovana dia voadio ary na amin'ny 5.5in efijery, fa ny manageable finday avo lenta ampiasaina isan'andro.
ny vaovao, nohatsaraina fitaovana Android mety tsy ho tena ny hoe mpiady varotra tsy ny OnePlus 3 dia, saingy mbola hatrany tao amin'ny tsara indrindra
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “OnePlus 3T famerenana: -tampon'ny-farany finday avo lenta izay tsy mety handrava ny banky” nosoratan'i Samuel Gibbs, fa theguardian.com tamin'ny Alatsinainy 5 Desambra 2016 07.00 UTC
Ny OnePlus 3T dia tsy ampy taona ny iray vaovao tena tsara finday avo lenta izay manan-danja kokoa amin'ny faritra sasany, nefa dia tsy tena ny hoe mpiady varotra tsy tany am-boalohany dia.
Ny Shinoa mafy finday avo lenta ihany namoaka ny OnePlus 3 tamin'ny volana Jona, fa efa izany dia efa nosoloana. Ny 3T dia Saika mitovy ny ny nodimbiasany, kely loko hafa teo ivelany ny hany famantarana izay zavatra efa niova.
Araka ny OnePlus mpiara-manorina Carl Pei, ny orinasa nanana fanatsarana ny sasany misy izay mifanaraka kokoa na latsaka ao amin'ny fonosana ihany - lehibe kokoa bateria, haingana processeur sy nohatsaraina fakan-tsary - toy izany, fa tsy miandry ny taona, izany fotsiny nisolo ny OnePlus 3 miaraka amin'ny 3T.
Fa tamin'izany andro izany ihany koa dia nitombo ny vidin-ny finday avo lenta, avy amin'ny tany am-boalohany £ 309 amin'ny fandefasana, amin'ny alalan'ny fitsapa-kevi-Brexit ny lahatsorany vola fanitsiana ny £ 329 ny fanombohana vidin'ny £ 399. Moa ny vaovao £ 70 3T danja mihoatra noho ny taloha 3?
Voadio sady mandimandina
Ny basy metaly loko fotsy dia mainty noho ny kely ny fotsy ny OnePlus 3. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Aluminium ny malambolambo amin'ny curved vatana indray sy beveled mahatsapa lafiny rehetra araka izay tsara kely enim-bolana eo ny 3T. Izy io dia tena tsara finday avo lenta mba hanao, hikasika sy mankasitraka: tsy misy isalasalana fa ny 3T manana ny fijery sy ny mihevitra ny smartphone niaritra mihoatra lavitra noho £ 400.
Ny 5.5in 1080p AMOLED lamba lehibe. Ankehitriny ianao dia afaka ampanjifaina ny loko feo ny eritreritsika, na dia avy amin'ny efajoro ankamaroan'ny olona tena ho sambatra amin'ny kolaka loko OnePlus Mampiasa fomba oharina amin'ny hafa AMOLED-mampiasa finday toy ny Samsung Galaxy S7.
Miaraka amin'ny Pixel hakitroky ny 401 teboka isaky ny santimetatra, ny 3T dia tsy tena toy ny miavaka araka izay farany ambony-Android mpifaninana, izay manana fanapahan-kevitra amin'ny HD QUAD mitovy habe efijery, ary noho izany paosin-by-lafiny amin'ny 534ppi Google Pixel XL dia mijery kely tsy Pin maranitra. Ho faly indrindra izany, na dia ho hita fa mahantra noho ny zava-misy fangatahana virtoaly.
Ny tery bezels sy curved indray ataovy nanolotra manageable iray-na dia ny 5.5in efijery. Tsy tena toy ny kely toy ny amin'izao fotoana izao ny lehibe, mpanjakan'ny lamba tao amin'ny matanjaka kely finday, ny Samsung Galaxy S7 Edge, nefa 1mm teritery kokoa noho ny Pixel XL.
Ny mailo Slider mamela anao haingana mifamadika eo mangina, laharam-pahamehana sy ny fampahatsiahivana. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
OnePlus 'tsara fampahafantarana Slider mameno tsara ny sasany nanao bokotra eo amin'ny ankaviany sy ny ankavanan'ny telefaonina.
Screen: 5.5manontolo HD AMOLED (401ppi)
Processor: QUAD-fototra Qualcomm Snapdragon 821
Storage: 64 na 128GB
Rafitra fikirakirana: Android 6.0.1 OxygenOS 3.5
Camera: 16MP aoriana fakan-tsary amin'ny OIS, 16MP anoloana-miatrika fakan-tsary
Fifandraisana: LTE, Dual-Sim, Wifi, NFC, USB-C, Bluetooth 4.2 ary ny GPS
Dash Niandraikitra ny alalan 'USB-C ho haingana hameno. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Ny OnePlus 3T manana mitovy habetsaky ny fahatsiarovana sy ny fitehirizana ho toy ny nodimbiasany, fa manana mahery vaika kokoa processeur kely: ny Snapdragon 821 from Qualcomm, izay ampiasaina amin'ny hafa faran'ny avo-Android finday avo lenta ao anatin'izany ny Pixel XL.
Izany mahatsapa snappy, fa tsy tena ny finday avo lenta haingana indrindra eny an-tsena: ny Huawei Mate 9. Tsy mahatsapa na haingana kokoa noho ny OnePlus 3, fa ny bateria dia naharitra intsony eo amin'ny anjara-raharahany. Izany dia somary lehibe kokoa bateria, sy ny rindrambaiko fanatsarana nandritra ny enim-bolana farany no nanao ny zava-nitranga malama.
Ampiasaina ho toy ny fitaovana voalohany indrindra tamin'ny dimy ora ny mihaino mozika amin'ny alalan'ny Bluetooth earbuds, telo ora lany Browsing na mampiasa fampiharana, tsindraindray lalao ary maka sary, -jatony ny hanoto fampahatsiahivana mandritra ny tontolo andro, ny OnePlus 3T naharitra manodidina 36 ora eo fiampangana.
Ny lehibe fanatsarana ny 3 efa in standby fampisehoana: aiza ny 3 nandatsaka 12-16% levitra, ny 3T nandatsaka ihany 4%, izay tsara indrindra raha oharina amin'ny ankamaroan'ny fifaninanana.
Fa mamaly ny bateria dia fifadian-kanina, koa. Miaraka OnePlus 'format manan-tompo Dash Niandraikitra adaptatera hery sy ny tariby dia naka fotsiny ny 70 minitra mba hahatratra 100% avy aotra anjara-raharaha, izay mahitsy miakatra ao amin'ny finday avo lenta fa mamaly ny haingana indrindra. Mety ho voampanga ihany koa ny mampiasa tsara tarehy be misy USB dovia, fa amin'ny fitsipika taha.
Sim roa slots mamela anao roa isa iray mifandray amin'ny finday. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Ny OnePlus 3T koa fiaviana roa-Sim fanohanana, izay midika hoe fifanarahana finday roa sy isa roa dia azo ampiasaina amin'ny andro izany ao anatin 'ilay finday. Tena iraisana sy ny endri-javatra mahasoa in Asia, fa tsy fahita firy ao amin'ny UK, ary mahatonga mandeha na juggling ny asa sy ny telefaonina manokana mora kokoa ao anatin'ny fitaovana iray.
Ny tondro scanner eo anoloana, izay avo roa heny toy ny an-trano ny bokotra, dia tsara. Tena mafy, marina sy miasa mafy.
OxygenOS 3.5 dia kely tweaked dika ny Android 6 Marshmallow amin'ny sasany ny endri-javatra ny Android 7 Nougat. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
OnePlus customises Android mba hamoronana OxygenOS. Tsy toy ny hafa mpanamboatra ny fiovana dia saro-takarina, fanatsarana bebe kokoa fa tsy henjana fanovana.
Raha toa ianao mpankafy ny fitsipika Android traikefa, dia mankasitraka OxygenOS. Tsy manana safidy customization bebe kokoa, avy ny fahaizana Ampifamadiho ny Fikarohana bokotra eo, ataovy eo amin'ny lamba na mampiasa ny capacitive bokotra anilan'ny tondro scanner, ny nampahazo fihetsika fanohanana sy tweaks ny roa sosona-Sim fahaiza-manao.
Fa ny 3T sambo amin'ny OxygenOS 3.5, izay mifototra amin'ny tamin'ny taona lasa ny Android 6.0.1 Marshmallow, tsy ny vaovao Android 7 Nougat. OnePlus manantena ny manana fanavaozam-baovao ho Nougat misy eo anoloan'ny faran'ny taona. Hatreto aloha, fa tsy nisy ny lalana tsara indrindra ho an'ny haingana firaketana rindrambaiko fanavaozam-baovao, fa efa nahazo tsara kokoa noho ny tamin'ny volana vitsivitsy.
Ny fakan-tsary dia ny tsara sy ny fakan-tsary fampiharana mora ampiasaina. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Ny 16-megapixel aoriana fakan-tsary dia manana kolaka ny sasany fanatsarana ny antsipirihany sy ny tabataba fanafoanana ny OnePlus 3. Ankapobeny izany ny mahay fakan-tsary, mitifitra tsipiriany tifitra tsara jiro sy mafy, raha tsy miavaka tifitra in lowlight. Tsy tena ho tsara toy ny tsara indrindra avy amin'ny Samsung na Google, fa sarotra ny haka ny fako nitifitra tamin'ny 3T.
Ny 16-megapixel selfie fakan-tsary dia iray amin'ireo fanapahan-kevitra ambony indrindra anoloan'ny-miatrika fakan-tsary misy, ary na dia bebe kokoa foana megapixels tsy azo ampitahaina vokatra tsara kokoa, ny 3T namokatra ny sasany amin'ireo antsipirihany indrindra sy voajanahary tarehy selfies hatramin'izay aho voatifitra, na dia ao anatin'ny toe-piainana sarotra jiro toy ny birao fluorescent esory jiro.
Ny OnePlus 3T tsy ampy amin'ny basy na vy fotsy na volamena malefaka amin'ny 64GB ny fitehirizana ny £ 399 na ara-basy vy amin'ny 128GB ny fitehirizana for £ 439. Tena misy ihany koa amin'ny finday fifanarahana tamin'i O2 ao amin'ny UK.
Fa raha oharina, ny 5.5in Samsung Galaxy S7 Edge ny vidin'ny £ 520, ny Google Pixel XL ny vidin'ny £ 719, ny Huawei Mate 9 ny vidin'ny € 699 (£ 589) ary ny Apple iPhone 7 Bebe Kokoa ny vidin'ny £ 719.
Tsy tena ny hiady varotra ny OnePlus 3 dia, ary tsy mihevitra izany £ 70 mendrika mihoatra noho ny teo aloha modely. Fa amin'ny vola fiovaovan'ny ny lalana izy ireo sy ny antsasa-kilao teo hamely ny US dolara izany tsy izay mikasika ny tombony. Mbola zava-dehibe tsara ho an'ny £ 400, rehefa Paoma ary Google ny mitovy finday avo lenta, izay mirehareha tsy fitehirizana, lany £ 719.
Miaraka amin'ny manohana ny O2, OnePlus koa ankehitriny, dia manana bebe kokoa ara-drariny toy ny mpanamboatra ao amin'ny UK. Ary raha misy tokoa toerana ho fanatsarana, ny orinasa dia nanao ny nanolotra haingana rindrambaiko fanavaozam-baovao.
Ianao mahazo mihoatra noho izay handoavana ny OnePlus 3T ampitahaina amin'ny mpifanandrina.
Mahatsara: rehetra-vy, tondro lehibe sensor, tsara efijery, mafy fa mamaly ny, tsara fakan-tsary, fampahafantarana tsara Slider, lafiny roa-Sim amin'ny fiaviana roa standby, mora vidy kokoa noho ny mpifanandrina
Maharatsy ny mifampiresaka: Tsy tena ho mora toy ny indray mandeha teo, tsy removable bateria, tsy expandable fitehirizana, miadana fa mamaly ny amin'ny anjara-raharaha tsy Dash fahefana adapters, lamba ambany Res for VR, tsy mbola mihazakazaka Nougat
Ny curved mahatsapa indray lehibe eny an-tànan'ny ary mamokatra ny sasany sy ny lokony fandinihana mahaliana avy amin'ny loharano samihafa fahazavana. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Dimy ny tsara indrindra ho an'ny phablets 2016
OnePlus 3 famerenana: flagship telefaonina ao amin'ny tapaky ny vidin'ny isan-karazany
Huawei Mate 9 famerenana: lehibe efijery, ny fiainana sy ny bateria ela mizara roa ny fakan-tsary
Google Pixel XL famerenana: tena tsara phablet fa amin'ny vidiny tenifototra mba mifanaraka
Huawei P9 Plus famerenana: avo-kilasy phablet natao indray ny zana-feh rindrankajy
iPhone 7 Plus famerenana: 2014 antsoina hoe - tiany ny phablet indray
Electric fiara manjakazaka amin'ny Frankfurt Auto Show
Hoe inona no lehibe indrindra Izao Rehetra Izao zavatra izany eto amin'ny?
Detailed Indrindra Scan Of Pluto
← Amazon Echo Dot Review No Fotoana Ampifamadiho ny Mac noho ny amin'ny Windows Laptop? →